1-Saddex iskuma kaa qabato
Saddex in aysan isku kaa qabanayn waligaa maankaaga ku hay.
In aadan dhimasho ka badbaadayn maankaaga ku hay.
In nolosho aysan raaxo joogta ah lahayn, mar walbana dhibkeeda iyo dheefteeda ay is garab socdaan.
In aadan dadka ka nabad galayn marnaba, xitaa haddaad nabad galiso.
2-Ha u qurxin
Ha u qurxin qofka hadal uusan si dhab ah dareenkiisa kuu galin, hana ku dhihin qofka hadal aan qalbiga kaa jirin, maxaa yeelay labadaas sifaba waa sifada munaafaqnimada, iyo muujinta daciifnaantaada.
3-Noqo Qofka aad tahay
Iska dhigidda ama iska doon doonidda aad qof kale iska doontaa micnaheeda waa in aad lumisaa ama garan waysaa shaqsiyaddaada dhabta ah, kadibna waxaad bilaowdaa in aad dib isku raadiso adiga oo aqoon halka aad iska heli lahayd, hadaba, noqo qofka aad tahay ama aad doonayso in aad noqto marba haddaadan Alle caasinayn, inta badan oo aad noqotaa qofka aad tahay waa inta badan ee aad Qurux badan tahay.
4-Dacwo iyo Dareen
Haween midda ugu murugada badan waa midda ka cabsata mar walba in uu ninkeeda Naag kale la guursado amaba aan ku kalsoonayn, mar walba waxay ku mashquushaa telkiisa, meelaha uu aado,shaarkiisa carafta kasoo duxaysa, haddii ay ahayd barafuunka gurigeeda yaala ama mid kale oo aysan aqoon, waa qof wax ka baqaya, isma oga oo waxay dhib ku haysaa nafteeda iyo tan ninkeeda, waqti uma haysato in ay ninkeeda si kale u hanato oo isku qurxiso, mar walba dacwo iyo dareen xun ayaa ku jira, dooddeedana dhamaad ma lahan, haweenayda nuucaas ah ninka haysan kara waa kuma?
5-Waad nasiib badantahay.
Ma jiro qof nasiib daran, hadduu jirana waa qof aan iimaan lahayn, macnaha dadnimadana aan garan karin, qof walba Alle ayaa abuurtay, isaga ayaan u doortay sida uu doonayo in uu noqdo, bal ka waran adiga muslimka ah haddii aad mar walba dhahdo waa nasiib xumahay ama nasiib ma lihi, bal is waydii maxa kaa maqan? maxaase ka nasib badan in laguu doortay in aad muslim Alle kaliya caabudayo aad noqotid oo aadan ka mid noqon kuwa Asnaamta caabudo amaba aan diinta lahayn? .
6-Ooyi lahaydaa ama Qosli lahaydaa…
Waqtiga noloshaada wuu soconayaa, sida loogu tala galay ayuuna ku soconayaa, Ooyi lahaydaa ama Qosli lahaydaa, hubaal in murugada ama wal walka uusan waxba ka baddalayn Qaddarta kugu dhacday iyo sida aad noqon lahayd, adiga ayuu kusii culaysiinayaa ma ahee.
Waxaa la yiri “walwalku waxba kama taro xanuu kaaga barrito, ee wuxuu u baas tagaa caafimaadkaaga maanta.
7-Dib uma soo ceshan karno
Dib uma soo ceshan karno sharaftii inaga luntay iyo qiimihii nolosheena ee aan maashaynay 25 kii Sano ee inasoo dhaafay, balse mid waan samayn karnaa, waan is baddali karnaa, waanu iska dhigi karnaa Umad gabi ahaanba ka duwan umaddii shalay ee jahliga iyo qabyaaladda ay daashatay, hormood waan u noqon karnaa umadaha dhigeena dunida ah, dadnimadeenana dib waan u heli karnaa, waasa goormee? waa marka isbaddal in aan samayno aan daacad ka noqono, dibna u eegin wixii inaga dhacay, diiraddana saarno dunida horteena ah ee ina sugaysa.
8-Dumar waxaa ugu farxad badan.
Dumar midda ugu farxad badan waa midda seexata iyada uusan qalbigeeda ku jirin ka fakaridda nin iyo xaaladdiisa, soona toosta iyada oo nafteeda farax galisa, uusana jirin nin xurriyaddeda hogaanka u haya, iyo jacayl cadaabaya laabteeda.
Su’aashaydu waxay tahay ma tahay qoftaas heblaay.
Alle qofka tuugaa saddex jawab ayuu midkood siiyaa, oo wax la’aan ma dhigo addoomadiisa, ducadiisana wuu aqbalaa.
Mar ducadaada sida ay tahay ayaa loo aqbalaa
Marna waxaa lagugu dhahaa wali waqtigaaga lama gaarin oo qaddarta ma dhicin.
Marka saddexaadna waxaa la dhahaa wax ka wanaagsan waxa aad tuugayso ayaan kuu diyaarinay ee sugo.
10- Saddex Waji
Qof walba saddex waji ayuu leeyahay
Laba wuu muujiyaa oo waa laga arkaa, midna ma muujiyo oo isaga ayaa isku qaas yeelo.
Waji dunida ayaan tusnaa.
Wajina dadka aan danta ka leenahay si aan ugu dhawaano.
Midna cid ma tusno oo inaga ayuu nagu qaas yahay.
11- Farxad doon
Haddii aad doonaysid in aad farxad ku noolaato yeelo Hadaf, dad iyo wixii kasoo harana ka har warkooda.
12-Adduunyo qiima laay
Adduunyada haddii ay qiima leedahay dadkii Alle doortay ee wanaagsanaa lagama qaateen, waxaa isku soo haray Munaafaqiin iyo Kufaar isku adeegaya oo is walaashanaya, iyo mu’min imtixaaman oo lagu imtixaamay mid u nasab sheegta diintiisa.
13-Kaligaa ayaad ahaanaysaa
Bilowga noloshaada wax walba waa kula jiraan, wax walbana waad haysataa, marka korriimada nolosha ay kuu bilaabato, Nolosha waxay bilowdaa in ay kugu riixdo Waddo aad kaligaa ku noqon doonto dunida ilaa maalinka ugu dambeeya noloshaada, Alle oo kaliya ayaan mar walba kaa harayn oo bilowgaaga ilaa dhamaadkaaga kula jira, isla isaga ayaana hadhow ku dhiganaya halka uu kuu doortay (Janno iyo Naar)
14-Salliga Nabiga scw
Qofki doonaya Laab dagan, Dambi dhaaf, kurbada oo laga feedo, isku buuqidda uu ka baxo, ha badiyo Salliga Nabiga Scw.
Xaqiiqda Nolosha ayaa ah mid ka kooban Farxad, Khibrad, Xusuus, iyo shallayto.
Wax walba oo wanaagsan, waa inoo Farxad
Imtixaan walba oo la kulano, waa inoo Khibrad
Waqti adag iyo mid wanaagsan oo aan soo marnayna, waa inoo xusuus
Xumaan ama arrin aan qaab xun u maamulnay oo cawaaqibkeeda aanan mahadina, waa inoo shallayto, oo mar walba waxaan ku hadaaqnaa haddii aan sidaa samayn lahaa, haddaan sidaa yeeli lahaa.
Waxaa la dhahay asxaabta xun oo kugu badataa micnaheeda waa maladaada xun ee ku aaddan asxabta wanaagsan oo badataa.
Dulqaadkaaga oo bata, lagu daray riixidda ama cadaadis badan oo lagu saaro, wuxuu ku gaarsiiyaa maalin aad xitaa aamini waydo cudurdaarka dhabta ah ee qof kuu cudur daarto.